Buhari oo burcadda xoolaha la dagaalamaya - BBC Somali
Buhari oo burcadda xoolaha la dagaalamaya
Image caption Buhaari ayaa ahmiyad gaar ah siiyay ammaanka.
Madaxwaynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku sugan gobolka Zamfara ee waqooyi galbeed, halkaas oo lagu soo bandhigayo hawlgal millatari oo wayn kaas oo lagula dagaalami doonno burcadda xoolaha dhacda.
Burcaddaas ayaa dhibaato badan ka gaysata ku haysa Nigeria iyo dalalka dariska ah.
Sanadkasta waxay dilaan boqolaal dad ah, tuulooyinka aan wax difaaca haysanin ayayna weeraraan tan iyo sanadkii 2011-kii.
Tallaabadan ayaa qeyb ka ah dhaqdhaqaaqyo lagu xusayo maalinta ciidammada ee dalka, taasi oo lagu xasuusto dagaalkii sokeeye ee uu dhiiga badan ku daatay ee dalkaasi ka dhacay dabayaaqadii lixdameeyadii.
Wasiirka Difaaca ee Nigeria Mansur Dan Ali ayaa BBC-da u sheegay in madaxweynuhu uu maanta guuto ka tirsan ciidammada uu amar ku siin doono in ay fuliyaan howlgalka oo ay u dhaqaaqaan kaynta si ay uga sifeeyaan kooxahaasi dilaaga ah.
Dan Ali ayaa sheegay in ciidamo kale oo dheeraad ah ay howlgalkaasi ku biiri doonaan, kaasi oo la filayo inuu socon doono muddo lix bilood ah.
Daahfurka howlgalkan ballaaran ayaa imanaya xilli ay cabasho ballaaran muujiyeen dadka deegaankaasi kuwaasi oo sheegay in mas'uuliyiinta maxaliga ah ay ku guuldaraysteen inay difaacaan.
Kumannaan isugu jira dad iyo xoolo ayaa halkaasi lagu laayay kaddib markii kooxahan burcadda ah ee xoolaha dhaca ay habeen iyo maalinba u dhacaan tuulooyinka iyagoon cidna u aaba-yeelin.
Boqolaal qoys ayaa waxa ay la daalaa dhacayaan cunno iyo hoy la'aan ku haysata magaalooyinka waa weyn kaddib markii ay ka soo carareen tuulooyinkooda halkaasi oo ay burcaddu sanadkan ku amartay in aanay beeraha qodan karin.
Sideed beeraley ah ayaa lagu soo warramay in la toogtay kaddib markii ay iska dhega tireen digniinihii loo soo gudbiyay.
Todobaadkii la soo dhaafay burcadda ayaa waxa ay galeen tuulo halkaa ku taalla oo ay ku dileen ugu yaraan 15 qof oo u badan haween socodkii gabay.
Dhanka kale waxaa jira cabsi ah in dagaalyahano ka tirsan Boko Xaraam ay dhexgaleen burcadda kaddib markii laga soo saaray waqooyi bari.